डा.शर्माकै लाईनमा सरकार: पीसीआर परीक्षण शुल्क २ हजारमा झर्यो – Makalukhabar.com
मकालु खबर	 Sep 14, 2020 मा प्रकाशित 2,305
काठमाडौं । सरकारले पीसीआर परीक्षण शुल्क ४४ सय तोकेका बेला काठमाडौं मेडिकल कलेजले गत सोमबारबाट २५ सय मै पीसीआर परीक्षण गर्न थाल्यो । केही साता अघि मात्रै काठमाडौं मेडिकल कलेजको अध्यक्ष बनेका डा.सुनिल शर्माले सरकारले तोकेको भन्दा १९ सय रुपैयाँ कम शुल्कमै पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाए । पीसीआर परीक्षणमा यो नेपालकै सबैभन्दा सस्तो शुल्क हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको भन्दा झण्डै आधा शुल्कमै डा.शर्माले पीसीआर परीक्षण गराउँन थालेपछि मन्त्रालयलाई नैतिक संकट पर्यो । डा.शर्मा उही हुन् जो मोरङको क्षेत्र नं.३ मा गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग पराजित भएका थिए ।
ढकालले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षण शुल्क ४४ सय तोकेका बेला ढकालसँगै हारेका डा.शर्माले मन्त्रालयले तोकेको भन्दा १९ सय कम शुल्कमा निजी क्षेत्रबाटै पीसीआर परीक्षण गराउँन थालेका हुन् । निजी क्षेत्रले २५ सयमै पीसीआर परीक्षण गराउँन सक्छ भने सरकारले ४४ सय शुल्क तोकेर जनतालाई राहतको सट्टा आहात दिएको भन्दै सरकार र मन्त्री ढकालको आलोचना भएको थियो ।
बिदेशी दातृ निकायबाट अरबौंको किट निःशुल्क पाउँदा पनि सरकारले निःशुल्क किट उपलब्ध गराएर सहुलियतमा परीक्षण गर्ने बातावरण नमिलाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
याे पनिः काठमाडौं मेडिकल कलेजमा अब रु. २४९९ मै कोरोनाको परीक्षण गर्न पाइने
corona virousdr. sunil sharma